Dowladda Jabuuti oo ka jawaabtay eedeyn uga timid Farmaajo | Banaadir Times
HomeUncategorisedDowladda Jabuuti oo ka jawaabtay eedeyn uga timid Farmaajo
Dowladda Jabuuti ayaa si weyn uga jawaabtay hadalkii shalay kasoo yeeray Wasiirka warfaafinta xukuumadda xil gaarsiinta Cismaan Abuukar Dubbe ee ku aadana in dowladda Jabuuti ay ka waddo Midowga Afrika Olole ka dhan ah Soomaaliya.
Wasiirka Maaliyadda dalka Jabuuti Ilyaas Maxamed Dawaale ayaa ku tilmaamay go’aanka xukuumadda Soomaaliya kasoo baxay mid niyad ku ah labada dal oo ah kuwo walaalo ah oo iskaashi badan uu dhex yaallo.
“Aad ayaan uga xumahay oo waxaan uga xumahay maqalka wasiir sare oo ka socda Soomaaliya oo ku celcelinaya mar labaad, eedeymo kale oo been abuur ah oo ah in dowladda Jabuuti uu ajande ka leedahay xiisadaha siyaasadeed ee hadda ka jira Soomaaliya” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Wasiirka.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda xilgaarsiinta Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa uga digay dowladaha Kenya iyo Jabuuti inay faragerlin ku sameeyaan Go’aanada ku saabsan Arrimaha Soomaaliya ee kasoo baxay Shirka Guddiga Amniga ee Midowga Afrika, kaas oo ka socda Magaalada Addis Ababa.
Previous articleMareykanka oo taageeray go’aanka kasoo baxay Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika
Next articleTaliska Mareykanka oo sheegay in Muddo kordhinta ay ka weyn tahay dagaalka Al-Shabaab